Daawo:- Siyaasi suaal adag waydiiyay Muuse Biixi “Sucuudiga maxaad udoontay”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- Siyaasi suaal adag waydiiyay Muuse Biixi “Sucuudiga maxaad udoontay”.
Daawo:- Siyaasi suaal adag waydiiyay Muuse Biixi “Sucuudiga maxaad udoontay”.
August 14, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Soomaliya, Wararka maanta 2
Siyaasiga caanka ah ee Reer Somalilabd Ramaax oo lahadlay qaar kamid ah saxaafadda ayaa si adag uga hadlay arimaha kusaabsan socdaalka Muuse Biixi ee Dalka sucuudiga.
Siyaasiga ayaa suaalo hawada umariyay Muuse Biixi kuwaas oo ay kamid yihiin “Madaxwayne maxaad udoontay sucuudiga? Ujeedkaaga ma wuxuu ahaa inaad sawiro lasoo gasho wasiirada xamar? Maxaad udayacday dantii ay kugu aamineen shacabkaaga”.
DEG DEG+DAAWO: Axmed Madoobe oo amar adag ka helay Sirdoonka Itoobiya?
Maxaad sucuudiga ka doontay maahan su’aal adagee waa mid ardaalnimo sababtoo ah qof kastoo muslin ah waa tagi karaa. ma waxaa la door bidi lahaa inuu israaiil ku soo cumreeysto waa yaabee?
Garoowe hayska soo dago hadii woqooyiga laga nacay. Waa welcome.
Kkkk xanuun kan SNM haayo waxaa iga sii daran beenta ay lasoo idhacadyihin maxishoodan kii ugu doqonsana ee muuse.danyeer ayaa dowlad faderalka isku soo sawiray bal yaa la tashanayo doqonkan kulahaa xabad ayaa naga dhexeyso. Yaad xabad kala dhexeyso bal hal.qiibil oo kaliya oo kula daga ayaa meel kusaray ma somaliya ayaad la dagali kartaa kuwani walahi waa qabiil dhan oo wada alaalax ah